घरलाई नै विद्यालय बनाउन सकिन्छ : अभिषेक घिमिरे - CentralKhabar - No 1 Online News Portal from Nepal
घरलाई नै विद्यालय बनाउन सकिन्छ : अभिषेक घिमिरे
सेन्ट्रल डेस्क प्रकाशित मिति : २९ बैशाख २०७८, बुधबार २३:०९
शिक्षक साथी तथा अभिभावकज्यू ,
घरलाई नै विद्यालय बनाउन सकिन्छ ।
अभिभावक आफैँ शिक्षक बन्न सक्छन ।
घरभित्रका सामाग्री र गतिविधिलाई नै पाठ्यक्रमसँग जोडेर सिकाउन सकिन्छ ।
आज र भोलि क्रमिकरूपमा प्रकाशित हुने यो अङ्कमा पूर्व प्राथमिक तहका वा पाँच वर्षमूनिका बालबालिका कस्ता हुन्छन् ? उनीहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? उनीहरूलाई लक्षित गरेर घरमा कस्ता गतिविधि गराउन सकिन्छ भनेर चर्चा गरिएको छ। यो उमेर समूहका बालबालिकालाई कस्ता जीवनोपयोगी सीप सिकाउन सकिन्छ, घरलाई नै कसरी मन्टेश्वरी ल्याब बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिएको छ । यो अङ्कमा प्रस्तुत गरिएका विषय मन्टेश्वरी अवधारणामा आधारित हुनेछन् ।
१. सबैभन्दा पहिले बाल विकासका आयामहरू बुझ्नुहोस्। बालबालिकाको चौतर्फी वा सर्वाङ्गीण विकासका लागि निम्न कुरामा ख्याल पुर्याउनुहोस ।
क. शारीरिक_विकास उमेर अनुसार शरीरको तौल तथा उचाइ, पौष्टिक आहार जस्ता कुरा शारीरिक विकासका महत्त्वपूर्ण आधार हुन् । व्यक्तिगत सरसफाइ, शारीरिक गतिविधि तथा खेल लगायत यसमा पर्दछन् ।
ख. मानसिक_तथा_बौद्धिक_विकास सोच्ने क्षमताको विकास, बौद्धिक तथा तार्किक क्षमताको विकास, पढाइ तथा लेखाइ सीप, भाषिक सीप लगायत यसमा पर्दछन् ।
ग. सामाजिक_विकास सहयोग, सहकार्य, संस्कार, आचरण, आत्मनिर्भरता लगायतका विषय यसमा पर्दछन् ।
घ. भावनात्मक_तथा_संवेगात्मक_विकास मनसँग सम्बन्ध राख्ने डर, माया, घृणा, रिस, जलन, आत्मविश्वास जस्ता विषय यस अन्तर्गत पर्दछन् । बालबालिकाको भावना र मनोविज्ञान यससँग जोडिएको हुन्छ ।
शिक्षक साथी तथा अभिभावकज्यू,
बालबालिका जुनसुकै उमेरको भए पनि यी चारओटा बाल विकासका आयामहरूलाई हामीले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तपाईँले विद्यालय तथा घरमा गराउने जुन सुकै गतिविधिमा यी चार आयामको समयोचित विकास भएको छ कि छैन भनेर ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।
२. जन्मिए देखि पाँच वर्षसम्मको उमेरलाई सिङ्गो मानव जीवनको स्वर्णिम काल मानिन्छ । हामीले पाँच वर्षभित्र सिकेको ज्ञान, संस्कार जीवनकाल पर्यन्त रहन्छ । त्यसैले, यो उमेरका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासको लागि गम्भीर बनेर सोच्नुहोस्।
३. पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको केही अद्भुत स्वभावबारे बुझ्नुहोस् ।
जन्मिएको ३ वर्षभित्र बालबालिकाको ९५ प्रतिशत मस्तिष्क विकास भएको हुन्छ ।केही अपवादबाहेक छोरीहरू छोराहरू भन्दा चाँडो बोल्न सुरु गर्दछन् ।
३ वर्षभित्र नै बालबालिकामा पढ्ने तथा लेख्ने अभिरुचि जागेको हुन्छ ।
३ वर्षमुनिका बालबालिका असाध्यै धेरै ईर्ष्यालु हुन्छन् । अरूको ध्यान आफूतिर खिच्न चाहन्छन् । यो उमेर समूहका बालबालिकाले असाध्यै धेरै नक्कल गर्दछन्, अर्थात् तपाईँको सिको गर्दछन् । तपाईँ जे बोल्नुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, उनीहरू त्यस्तै बन्न प्रयत्न गर्दछन् ।यो उमेर समूहका बालबालिका कल्पनाशील हुन्छन्। प्राय अभिनय गर्न मन पराउँछन् । ४ वर्ष लागे पछि ईर्ष्यालु स्वभाव बिस्तारै कम भएर साथीसङ खेल्न रुचाउँछन् । भाँडाकुटी खेल्न मन पराउँछन् । कथा सुन्न मन पराउँछन् ।यो उमेर समूहका बालबालिका असाध्यै जिज्ञासु हुने गर्दछन् । एकजना ४ वर्षको बालकले एक दिनभरिमा औसतमा ४३७ ओटा प्रश्न गर्दछ ।
४. तीन वर्षको बालक र चार वर्षको बालकको स्वभावमा धेरै फरक हुन्छ ।यो उमेर समूहमा हरेक कुराको विकास चमत्कारिक रूपमा हुने गर्दछ । त्यसैले उमेरअनुसार बालबालिकाको स्वभावमा आउने परिवर्तनसंगै अभिभावक तथा शिक्षकले उनीहरूसँग गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
५. बालबालिकासँग यी कुराहरू अनिवार्य पालना गर्नुहोस्
३ वर्षमुनिका बालबालिकालाई एक्लै नछोड्नुहोस् ।
उनीहरूका हरेक आवश्यकता जस्तै भोक, निन्द्रा, माया, सामिप्यता तत्काल पूरा गरिदिनुहोस् ।बालबालिकाले प्रश्न सोध्छन् । हरेक प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोस् । सही जवाफ आएन भने अर्को दिन खोजेर दिने प्रयास गर्नुहोस् । टार्नलाई गलत जवाफ दिने, झर्किने, प्रश्न सोध्न निरुत्साहित गर्ने काम बिल्कुल नगर्नुहोस् ।
उनीहरूलाई पर्याप्त समय दिनुहोस् । सँगै घरमा बस्दैमा समय दिएको हुँदैन । समय दिनुको अर्थ उनीहरूसँग उनीहरूको क्रियाकलापमा सहभागी हुनु हो । उनीहरूसँग केही छिन खेल्नुहोस्, अन्तरक्रिया गर्नुहोस्, उनीहरूका कुरा सुनिदिनुहोस् ।
भर्खर लेख्दै गरेका वा लेख्न सिक्दै गरेका बालबालिका छन् भने उनीहरूलाई प्रशस्त चित्र कोर्ने, रङ्ग भर्ने जस्ता गतिविधि गराउनुहोस् । यसो गरेमा उनीहरूलाई अनावश्यक दबाब हुँदैन र रुचिकर पनि हुन जान्छ ।
उनीहरूको छेउमा बसेर पुस्तक पढ्ने बानी गर्नुहोस्। पाठ्यपुस्तक भन्दा चित्रात्मक कथा भएका पुस्तक छेउमा बसेर पढिदिने बानी गर्नुभयो भने उनीहरूमा बिस्तारै पढाइप्रति रुचि जागृत भएर आउने छ । पुस्तकमा भएका चित्र बारे छलफल गर्ने, उनीहरूलाई विचार राख्न प्रेरित गर्ने जस्ता गतिविधिले उनीहरूको बौद्धिक विकासमा समेत सहयोग गर्दछ ।
उनीहरूको छेउमा कुनै पनि अनुचित काम नगर्नुहोस्। तपाईँले बोलेका र गरेका हरेक व्यवहारलाई उनीहरूले सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेका हुन्छन् । तपाईँको सिको गरिरहेका हुन्छन्। छोराछोरी जस्तो बनुन् भन्ने चाहनु भएको छ, पहिले आफू त्यस्तै बनेर देखाइदिनुहोस् ।
देउवालाई लाग्यो झड्का
पुन: प्रधानमन्त्री बन्दै ओली